Semalt: Ahoana ny fomba ampiasa WordPress Plugins
Ny famoronana plugin iray amin'ny tenanao manokana dia tsy sarotra be, ary afaka mamaha ny olana samihafa ao amin'ny tranonkalanao. Ny kopy, ny famoahana ary ny fametahana ny code dia tsy ampy satria tsy maintsy takatrao ny fomba ampiasain'ny WordPress plugins ary ny fomba hampivoarana azy ireo ao amin'ny fonction functions.php. Ny plugin dia fomba iray ahafahana mametraka ny tranokalanao.
Jason Adler, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia manantena fa mora ny manomboka amin'ny WordPress plugins, ary afaka mahafantatra ny fomba fiasan'izy ireo ianao. Plugins Wordpress dia ny sora-baventy PHP na codes izay afaka manova ny layout misy anao, mijery sy ny fotoana fenoina. Manome fitenenana feno amin'ny kakakaka izy ireo, ary izany no mahatonga ny fahatakarana ny fampiasana ny WordPress plugins ho an'ny mpitoraka blaogy sy webmaster rehetra. Tahaka ireo foto-kevitra ilaina hanampiana ireo fichier ary hijery ny tranokalanao, ny Plugins WordPress dia manatsara ny fahombiazan'ny pejy web anao.
1. FTP ao amin'ny tranokalanao
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny fomba fiasan'ny FTP, ary azo atao izany amin'ny fampiasana programa FTP manokana, toy ny Coda. Raha tsy mahafantatra na inona na inona momba ny FTP ianao, manoro hevitra anao hanadino ity dingana ity ary mandroso mankany amin'ny dingana manaraka.
2. Mandeha mankany amin'ny WordPress plugin
Raha vao mahazo fidirana amin'ny tranokala ianao amin'ny alàlan'ny FTP, ny dingana manaraka dia ny mivezivezy amin'ny ordinatera WordPress plugin. Ity lahatahiry ity dia hita ao amin'ny fizarana / wp-content / plugins ary mora hita.
3. Hamorona ny takelaka vaovao amin'ny plugin
Ho an'ny plugin rehetra noforoninao dia zava-dehibe ny mamorona tahiry misaraka. Mora ny mamorona, ary mila mandeha any amin'ny tontolon'ny WordPress ianao ary midira ny anaran'ny ordinateranao. Tsy ilaina ny mampiditra andalana, sehatra, teny na teny hafa mitovy izay sarotra inoana.
4..Hamorona ny tahiry PHP voalohany ho an'ny plugin plugin
Amin'ny dingana manaraka dia tsy maintsy mamorona ny antontan-drakitra voalohany ianao, izay tokony ho PHP tahiry ao amin'ny ordinatera WordPress plugin anao. Ataovy azo antoka fa nomena anarana manokana ho an'io rakitra io toy ny my-only-plugin.php. Raha vao efa niantso izany ianao dia aza adino ny manitsy ny rakitra ary mamonjy ny fanovana alohan'ny hanakatonana ny varavarankely.
5. Mametraka ny fampahalalana plugin
Ny farany sy iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra dia ny manaparitaka sy mametaka ny fampahalalana plugin ao amin'ny rakitra fototra. Tokony ho azonao antoka fa nampihatra ity code vaovao ity ianao ao amin'ny rakitra ary mamonjy ny fanovana.
<? Fi </p>
Plugin Name: Plugin Only
Description: Ity no WordPress plugins voalohany indrindra, ary faly aho mamorona izany.
Mpanoratra: Ny anarako
Mpanoratra URI: https://www.abc.mywebsite.com
Ity fango ity dia ny fanamarihan'ny PHP, izay tsy ho hita mivantana mivantana ao amin'ny sehatry ny Admin ao amin'ny WordPress. Na izany aza, WordPress dia mampiasa io kaody sy data manan-danja io mba hamoahana ny anaran'ny plugin anao ary hanampy anao hahazo tombony amin'ny plugins hafa koa. Tokony hahatakatra tanteraka ny fampahalalana ianao ary hahatsiaro ilay code voalaza etsy ambony raha te-hahalala ny fomba ampiasain'ny WordPress plugins ary manatanteraka ny asany maro isan-andro Source .